Fa inona no homen’ ny olona ho takalon’ ny ainy? - Robert C. Gay
Taona maro taty aoriana dia izaho indray no nametraka an’ io fanontaniana io ihany tamin’ ny mpihazona Fisoronana Melkizedeka iray izay somary nalaindaina. Lehilahy nahafinaritra izy io, izay tena tia ny fianakaviany. Saingy tsy nandeha tany am-piangonana izy efa ho taona maro izay. Nanan-janaka lahy iray manan-talenta izy, izay mpilalao fanatanjahan-tena tao anaty ekipa iray matihanina mitetitety faritra ary manao fanazaran-tena sy milalao amin’ ny andro Alahady. Io ekipa io dia efa nandresy im-betsaka tamin’ ny fiadiana ho tompon-daka avo lenta. Rehefa nihaona izahay dia nampahatsiahiviko azy fa amin’ ny maha-mpihazona fisoronana azy dia nampanantenaina izy fa raha milofo amin’ ny fianianany sy ny fanekempihavanany dia handray “izay rehetra ananan’ ny Rain[tsika].”2 Avy eo dia nanontaniako izy hoe: “Moa ve ny fiadiana ho tompon-daka nasionaly dia mah